तपाइँले बाटोमा हिडिरहेको बेलामा पैसा भेट्नु भएको छ ? टिप्नु पनि भएको होला ? यस्तो पैसा भेट्नुलाई कतिले शुभ र कतिपयले अशुभको रुपमा लिने गरेका छन् ।
जमिनमा फेला परेको सिक्का पैसाको सम्बन्ध आध्यात्मिकतासँग छ ।
प्रतिकात्मक रुपमा कुरा गर्ने हो भने धनको अर्थ शक्ति, सत्ता र मूल्यसँग छ ।
यसको सम्बन्ध इतिहासका साथ पनि छ किनकी यो एक अर्कासँग पुग्छ ।
जो व्यक्तिले भेटिएको सिक्का आफ्ना हातमा लिन्छ उसको शरीरको उर्जा त्यस सिक्काको माध्मबाट अर्को व्यक्तिसम्म पुग्छ । एक बाट अर्कोमा यो श्रृंखला बढ्दै जान्छ ।
हरेक व्यक्तिको उर्जा त्यस सिक्कामा पुग्ने गर्छ । र विस्तारै विस्तारै मानिसको उर्जा त्यस सिक्कामा संग्रह हुँदै जान्छ ।
यो अर्को कुराको पनि संकेत हो । शायद तपाईका पूर्खा यी सिक्काको माध्यमबाट आफ्नो आशिर्वात पुर्‍याउन खोजिरहेका हुनसक्छन् ।
तपाईले नोट या सिक्का भेट्नुभयो भने यो दुई कुरामा आधारित हुन्छ ।
यदी तपाई कुनै नयाँ योजनालाई साकार पार्न चाहिरहनुभएको छ भने त्यसका लागि सही समय आएको छ । यो सफलता, प्रगति तथा उपलव्धिको निशानी हो ।
आकाशीय शक्ति तपाईलाई बताउन चाहिरहेको हुन्छ कि तपाइृको मस्तिष्कमा जो विचार आइरहेको छ त्यसलाई सफलता तर्फ लैजान खोजिरहेको छ ।
यदी तपाईले नोट फेला पार्नु भयो भने यसको अर्थ तपाईले आफ्नो परिस्थितिलाई गम्भीरताका साथ हेर्न जरुरी छ । आफूमाथि विश्वास गर्दै निर्णयलाई कार्यरुप दिन जरुरी छ ।